SEBENZISA IYOUTUBE USEBENZISA YOUTUBE.COM/ACTIVATE (2021) - ITHAMBILE
I-YouTube liqonga lokuya kubantu abaninzi ukubukela iividiyo kwisizukulwana sanamhlanje. Nokuba ufuna ukubukela iitutorials ezifundisayo, okanye iimovie, okanye nokuba uthotho lwewebhu, iYouTube inayo, yiyo loo nto ipapasha ividiyo edumileyo kunye nendawo yokusasaza njengangoku.
Ngelixa unokubukela iYouTube kuyo nayiphi na i-smartphone ukuba inenkxaso yevidiyo kunye nonxibelelwano lwe-Intanethi nakwiikhompyuter ezinebrawuza exhaswayo ngonxibelelwano lwe-intanethi, ukubukela iYouTube kumabonwakude yinto eyahlukileyo yokunethezeka. Inkxaso yeYouTube kwiiTV ezikrelekrele ziyintsikelelo kuye wonke umntu.
Nokuba awunayo i-TV ene-android OS okanye i-smart TV, zininzi iindlela zokubukela iYouTube kumabonwakude wakho. Ngelixa uqhagamshela i-TV yakho kwikhompyuter lukhetho olucacileyo, unokumangaliswa kukwazi ukuba ungaqhagamshela iRoku, iRhafu, iXbox One okanye iPlayStation (PS3 okanye kamva) ukusasaza iividiyo zeYouTube ngqo kwiTV yakho.
cortana impazamo ebalulekileyo windows 10
Unokuzibuza ukuba uza kungena njani kwiakhawunti yakho kaGoogle kwezi zixhobo ukufikelela kumajelo akho abhalisiweyo kunye nohlu lokudlalwayo? Kulapho i-youtube.com/activate iza emfanekisweni. Ivumela ukusebenza kweakhawunti yakho yeYouTube kwimithombo yeendaba okanye kwimixokelelwano exhasa eli nqaku kwaye inciphise ingxaki yokufuna ukungena kwiakhawunti kaGoogle.
Kodwa uyisebenzisa njani? Masifumanise.
Uyenza njani iYouTube isebenzise i-youtube.com/activate
Indlela yoku-1: Yenza iYouTube isebenze kwiRoku
Indlela yesi-2: Yenza iYouTube isebenze kwi-Samsung Smart TV
Indlela yesi-3: Yenza iYouTube isebenze kwirhafu
Indlela 4: Yenza iYouTube isebenze kwiApple TV
Indlela yesi-5: Yenza iYouTube isebenze kwiXbox One kunye neXbox 360
Indlela ye-6: Yenza iYouTube isebenze kwiAmazon Firestick
Indlela yesi-7: Sebenzisa iYouTube kwiPlayStation
Indlela yesi-8: Yenza iYouTube isebenze kwiTV ekrelekrele
Indlela 9: Sebenzisa iChromecast ukuhambisa iYouTube kwiTV
Ngale nqaku, siya kuzama ukwazisa abafundi bethu kangangoko sinako malunga namanyathelo onokuthi uwalandele ukwenza iYouTube isebenze kwabanye babadlali abadumileyo beendaba kunye neekhonsoli ezisebenzisa youtube.com/activate
Yintoni ifolda windows windows 10 windows
Indlela yoku-1: A.ctivate YouTube kwiRoku
I-Roku yintonga yokusasaza onokuthi uqhagamshele kwiTV yakho kunye nonxibelelwano lwe-intanethi, imiboniso bhanyabhanya, imovie kunye nolunye udaba kuyo. Ukwenza iYouTube isebenze kwiRoku:
Okokuqala, qhagamshela intonga yakho yeRoku kwiTV yakho. Unxibelelwano lweWi-Fi luya kufuneka. Xa uqhagamshele, ngena kwiakhawunti yakho yeRoku.
Ngenisa iScreen seKhaya ngokucinezela iqhosha lasekhaya kwiRoku yakho ekude.
Khetha iVenkile yeChannel kwaye ucofe iqhosha le-OK kwindawo ekude yeRoku.
Ngaphantsi kweSimahla, khetha iYouTube kwaye ucofe u-OK kwindawo yakho ekude.
Khetha inketho yokongeza iShaneli kwaye ucinezele Kulungile.
Xa ugqibezela inyathelo lokugqibela, iYouTube iya kongezwa kwizitishi zakho. Ukuba ufuna ukujonga ukuba i-YouTube yongezwe ngempumelelo okanye hayi, cinezela iqhosha lasekhaya kude kwaye uye kwiiChannel zam. Ijelo le-YouTube kufuneka libe kuluhlu lweziteshi.
Vula iChannel yeYouTube.
Ngoku khetha i-icon yeGear ebekwe kwicala lasekhohlo lesitishi se-YouTube.
Ngoku, khetha Sayina ungene kwaye ufake ulwazi lweakhawunti yakho kaGoogle / YouTube.
URoku iya kubonisa ikhowudi enamanani asi-8 kwiscreen.
Ngoku yiya ku youtube.com/activate kwi laptop yakho okanye kwifowuni usebenzisa isikhangeli esixhaswayo.
Ngenisa ulwazi lweakhawunti yakho kaGoogle ukuba awukangeni kunye kwaye ugqibile inkqubo yokungena.
Faka ikhowudi enamanani asibhozo iRoku ebonisa ibhokisi kunye nokugqiba ukusebenza.
Cofa Vumela ukufikelela ukuba ubona naluphi na uncedo. Ngoku usebenze ngempumelelo kwiYouTube kwintonga yakho yokusasaza yeRoku usebenzisa youtube.com/activate.
Ukuba unayo i-Samsung Smart TV, uya kukuvuyela ukwazi ukuba inenye yeenkqubo ezikhawulezayo zokwenza iYouTube. Ukwenza njalo,
Qala iTV, kwaye uqiniseke ukuba unxibelelwano olusebenzayo lweWi-Fi. Vula ivenkile ye-Smart TV kwi-Samsung TV.
Jonga usetyenziso lweYouTube kwaye uyivule.
Insiza ye-YouTube, xa ivuliwe, iya kubonisa ikhowudi yokuvula enamanani asibhozo kwisikrini sakho seTV.
Vula isikhangeli sakho kwi-smartphone okanye kwi-PC kwaye uye kuYouTube.com/activate. Qinisekisa ukuba ungene kwiakhawunti yakho kaGoogle / YouTube ngaphambi kokuba uqhubeke.
Chwetheza ikhowudi yokuvula eboniswayo kwiscreen se-Samsung Smart TV.
Cofa kwindawo elandelayo.
Ukuba kukho ukukhawuleza ukubuza ukuba ufuna i-Samsung TV ukufikelela kwiakhawunti yakho, qhubeka uyivumele. Ngoku usebenze kwi-YouTube kwi-Samsung Smart TV yakho.
I-Kodi (eyayisaziwa njenge-XBMC) sisidlali semithombo yeendaba evulekileyo kunye nesoftware yolonwabo. Ukuba unayo iRhafu kwiTV yakho, kuya kufuneka ufake iplagi yeYouTube kuqala ngaphambi kokuvula iYouTube ngokusebenzisa youtube.com/activate. Nasi isikhokelo senyathelo ngenyathelo malunga nendlela yokwenza iYouTube isebenze kwiRhafu:
Okokuqala, khangela ukhetho Izongezo kwaye ufake apha: Indawo yokugcina / iZongezo.
Khetha iRhafu yokongezwa kweRhafu.
Sebenzisa ukhetho Ukongezwa kweVidiyo.
Khetha i-YouTube kwaye ucofe ukufaka ngoku. Inkqubo yofakelo inokuthatha umzuzu okanye emibini ukuyigqiba. Ukuqinisekisa unxibelelwano lwe-intanethi oluzinzileyo kuyacetyiswa.
Nje ukuba ukufakwa kugqityiwe, yiya kwiRhafu-ividiyo-Yongeza-kwiYouTube. Vula usetyenziso lweYouTube.
Uya kufumana ikhowudi yokuqinisekisa enamanani asibhozo kwiscreen sakho.
Vula iphepha lewebhu www.youtube.com/activate kwikhompyuter okanye kwi-smartphone.
Faka ikhowudi eneedijithi ezisibhozo ozibonileyo.
Cofa kwiQhubeka iqhosha kwiYouTube ukugqiba ukwenza iRhafu kwiYouTube.
Funda kwakhona: Iindlela ezili-15 eziSimahla zikaYouTube-Iindawo zeVidiyo njengeYouTube
Njengemfuneko, kuya kufuneka ukhuphele kwaye ufake usetyenziso lweYouTube kwiApple TV yakho. Vula ivenkile yosetyenziso kwaye ukhangele i-YouTube, uyifake. Nje ukuba kwenziwe oko, ungayenza iYouTube isebenze ngolu hlobo lulandelayo:
yeka ikhowudi dpc_watchdog_violation
Qalisa usetyenziso lweYouTube kwiApple TV.
Jonga kwimenyu yokuseta.
Sayina ungene kwiakhawunti yakho usebenzisa ukhetho olunikezwe kwimenyu yezicwangciso.
Qaphela ikhowudi enamanani asibhozo eza kuboniswa yiApple TV.
Ndwendwela i-www.youtube.com/activate kwi-smartphone okanye kwi-PC apho ungene khona kwiakhawunti efanayo ye-YouTube njenge-Apple TV.
Chwetheza ikhowudi enamanani asibhozo oyibhalileyo, kwaye uqhubeke ngokugqibezela ukwenziwa kusebenze.
Ukwenza kusebenze iYouTube kwiXbox yinkqubo ethe ngqo. Njengakwi-Apple TV, kufuneka kuqala ukhuphele kwaye ufake usetyenziso lwe-YouTube kwivenkile yeapp. Nje ukuba wenze oko,
Vula iYouTube kwiXbox.
Yiya ngokungena kunye noseto
Khetha Sayina ungene kwaye ucinezele iqhosha le-X kwisilawuli.
Inkqubo ye-YouTube iya kubonisa ikhowudi enamanani asibhozo. Nokuba uyibhale phantsi okanye ugcine esi sikrini sivulekile njengoko uzakufuna le khowudi kamva.
Ndwendwela iphepha lewebhu youtube.com/activate kwi-laptop yakho okanye kwifowuni. Kuya kufuneka ungene ngemvume kwiakhawunti enye yeYouTube njengeXbox. Ukuba awungenanga ngemvume, faka iinkcukacha zakho uze ungene.
Ukubuyela kwi-youtube.com/activate page, faka ikhowudi eneedijithi ezisibhozo eboniswe kwiXbox kwaye uqhubeke.
Ukuba ubona isiqinisekiso esikhawulezileyo sicela isiqinisekiso ukuba unqwenela ukuvumela ukufikelela kweXbox kwiakhawunti yakho, cofa kuVumela kwaye uqhubeke.
I-Amazon Fire Stick ivumela abasebenzisi ukuba basasaze kwiinkonzo ezinjengeNetflix, iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon, kwaye ngoku iYouTube ngqo kwiTV yakho. Ukwenza iakhawunti yakho yeYouTube isebenze kwiAmazon Fire Stick,
Kwi-TV yoMlilo yeAmazon, cinezela iqhosha lasekhaya
Yiya kwivenkile yeAmazon.
Khangela i-YouTube kwaye uyifake.
Kuya kufuneka ungene kwiakhawunti yakho yeYouTube.
Qaphela ikhowudi yokuvula enamanani asibhozo eboniswe kwiscreen okanye ugcine isikrini sivulekile
Ndwendwela www.youtube.com/activate usebenzisa isikhangeli esikwiLaptop, kwidesktop, okanye kwiselfowuni. Qinisekisa ukuba ungene kwiakhawunti yakho yeYouTube ngaphambi kokuqhubeka.
Faka ikhowudi oyibonileyo kwisikrini seTV, kwaye uqhubeke. Kwimeko apho ufumana naluphi na unyango, vumela, kwaye uqhubeke.
Funda kwakhona: Vulela i-YouTube xa uvaliwe kwiiOfisi, ezikolweni okanye kwiikholeji?
windows 10 ukuphuculwa kubambeke kuma-99
I-PlayStation, ngelixa ikwenza ukuba udlale uluhlu olubanzi lwemidlalo, ikwavumela ukuba usasaze imithombo yeendaba ngeendlela ezahlukeneyo zokusasaza ezikhoyo kwivenkile yeapp. I-YouTube ikwakhona, kwaye ukwenza iYouTube isebenze kwiTV yakho ngokudibanisa nePlayStation, landela la manyathelo angezantsi.
Vula usetyenziso lweYouTube kwiPlayStation. Nceda uqaphele ukuba kuphela yi-PlayStation 3 okanye kamva exhaswayo. Ukuba awunayo i-app efakiweyo, vula ivenkile yeapp, kwaye uyikhuphele.
Nje ukuba uvule usetyenziso, yiya ku Ngena kunye noseto.
Khetha ukhetho lokungena.
Inkqubo ye-YouTube ngoku iya kubonisa ikhowudi enamanani asibhozo. Qaphela phantsi.
Yonke i-Smart TV yanamhlanje ine-YouTube eyakhelwe kuyo. Kodwa, kwiimodeli ezimbalwa, kufuneka ikhutshelwe kwivenkile yeapp kuqala. Qinisekisa ukuba uyifakile ngaphambi kokwenza la manyathelo:
Vula usetyenziso lweYouTube kwi-Smart TV.
Nje ukuba uvule usetyenziso, yiya kuseto.
IGoogle Chromecast lukhetho olukhulu lokwabelana ngescreen okanye ukusasaza imultimedia ukusuka kwesinye isixhobo ukuya kwesinye. Iluncedo ngakumbi ukuba ufuna ukujonga into kwiscreen esikhudlwana, njengokufaka ividiyo kwifowuni yakho ukuya kwiTV. Kwimeko apho unemicimbi nge-YouTube app kwiTV yakho, unokufaka iChromecast kwaye uyisebenzise ukujonga iividiyo zeYouTube.
Qiniseka ukuba isixhobo sakho esiphathwayo okanye ithebhulethi ofuna ukusasaza kuyo ikwinethiwekhi ye-Wi-Fi efanayo neChromecast.
Vula usetyenziso lweYouTube.
Thepha iqhosha le-Cast. Itholakala phezulu kwesikrini saseKhaya sohlelo lokusebenza.
Khetha isixhobo ofuna ukusiphosa kuyo, kule meko, iya kuba yiTV yakho.
Khetha umboniso weTV okanye ividiyo.
Cofa kwiqhosha lokuDlala ukuba ividiyo ayiqali ukudlala ngokuzenzekelayo.
Funda kwakhona: Ungayenza njani iVidiyo yoBume beYouTube
Sizigqibile iindlela onokuthi uzisebenzise ukwenza iYouTube isebenzise i-youtube.com/activate. Ukuba ufikelele esiphelweni ngexesha layo nayiphi na kwezi ndlela, ungaqala kwakhona iTV yakho, ujonge kwaye uqalise kwakhona uqhagamshelo lwe-intanethi kwaye uzame ukuphuma nokungena kwakhona ngeakhawunti yakho ye-YouTube. UGoogle usinike ubunewunewu, kwaye ngeyoutube.com/activate, ungonwabela uluhlu olubanzi lweevidiyo zeYouTube kwiscreen esikhulu esihleli esofeni sakho.
ftp kwiwindows 10
iligi yamabali ngokucotha ukulungiswa kwesantya
Ayiphumelelanga ukudlala itoni yovavanyo windows 10
ukufaka iphakheji yendlela yonjiniyela inamathele
ukuqwalasela uhlaziyo lweWindows 10 ezinamathele kuma-99
esi sixhobo asikwazi ukuqala ikhowudi ye-10 ethernet